Maxay tahay warbixinta Gedo ee lagu wareejiyay Rooble? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Maxay tahay warbixinta Gedo ee lagu wareejiyay Rooble?
July 21, 2021 at 19:48 Maxay tahay warbixinta Gedo ee lagu wareejiyay Rooble?2021-07-21T19:48:32+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta la wareegay warbixin ay guddiga dib u heshiisiinta gobolka Gedo ka soo diyaariyeen gobolkaas oo muddo ay ka jirtay qalalaase siyaasadeed iyo mid amni.
Warbixinta guddiga ayaa ka kooban 6 qodob oo kala ah:
1. In Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya uu soo saaro wareegto uu ku amrayo dhammaan ciddii ay quseyso, gaar ahaan Laanta socdaalka, Hay’ada duulista hawada iyo hay’adda nabad sugidda ee ka howlgala garoomada diyaaradaha ee dalka, gaar ahaan kuwa ka howlgala garoonka Aden Cadde iyo kan Kismaayo in aan Muwaadin aan maxkamadi dambi ku soo oogin aan sabab aragti siyaasadeed darteed loo xanimi karin socdaalkiisa guud ahaan Dalka, gaar ahaanna in la fasaxo diyaaradaha iyo muwaadiniinta u kala safraya Mogadishu – Garbahaarey, Kismaayo – Garbahaarey iyo Garbahaarey – Kismaayo.
2. In isla wareegtadaas uu Ra’iisul Wasaaruhu ku soo saaro, in si waafaqsan heshiiskii 27 May 2021, aysan ciidamada kala duwan wax faragelin ah ku sameyn karin siyaasadda iyo amniga doorashada Dalka, marka laga reebo hay’adaha amniga ee loo xilsaaray fulinta qorshaha amniga doorashada. Amniga doorashada Garbahaareey waxaa loo marayaa si waafaqsan soo jeedintii Baydhabo iyo heshiiskii 27 May 2021 ee Golaha Wadatashiga Qaranka.
3. In Guddiga doorashada Jubaland (SIEIT) uu soo gudbiyo jadwalka goorta ay tagayaan Garbaaharey iyo wakhtiga la bilaabayo doorashada kuraasta 16ka ah. Waxaan kaloo soo jeedinaynaa in la tixgeliyo codsigii Bulshada Garbahaarey ee ahaa in lagu bilaabo doorashada magaalada Garbahaarey.
4. In ciidamada Dawladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan aagga Garbahaarey ay xoojiyaan amniga guud ee Degmada si looga illaaliyo in Argagixisadu soo farageliso habsami u socodka amniga doorashada Garbahaarey.
5. In Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka iyo Golaha Wadatashiga Qaranka ay si joogta ah uga wadatashadaan xaaladda amni iyo siyaasadeed ee qabsoomidda doorashada Gobolka si loo hubiyo habsami u socodka doorashada iyo hirgelinta dhammaan heshiisyada fududeynaya xasiloonida iyo nabadda doorashada kuraasta Garbahaarey.
6. Ugu dambeyntii waxaan soo jeedinaynaa in Magaalada Garbahaarey laga hirgaliyo mashaariic horumarineed oo deg deg ah si ay qayb uga qaadato soo kabashada kalsoonida bulshada ee dhanka dowladnimada. Mashaariicda horutabinta leh waxaa ka mid ah
1) In la hagaajiyo biyaha Magaalada
2) Dhismaha garoonka kubbadda cagta
3) In la dhiso suuq dadka ka dhexeeya
4) In la hagaajiyo jidadka Magaalada
5) In meel ku haboon laga hirgaliyo garoonka diyaaradaha.
The post Maxay tahay warbixinta Gedo ee lagu wareejiyay Rooble? appeared first on Puntland Post.
« R/W Rooble oo ka hadlay xal laga gaaray xiisadda Gedo oo loo soo gudbiyey + Video
Rooble: Siyaasiyiinta Magaalada Noo Faarujiya Doorashadi Waa Bilaabatay »